Burcadbadeedka reer binu Israa'iil ee xagjirka ah ee Golis Mugabe Insignia
Dharbaaxada reer binu Israa'iil
2 292 Ruqsadda.
Fadlan ogsoonow: silsiladda xeeladda ayaa la joojin karaa qiimaha oo aan la geeyn doonin meeshii ay ku socotay. Qoraallada Israel-qaawan maaha mas'uul ka ah mana ku soo laaban oo ma bixiso magdhow haddii xajinta la joojiyo oo aan la keenin.
Waxaan runtii jeclaan jirnay qalabka qoraalka ah ee Golan si aad u badan oo aan kuu keenno! Oak waa astaanta rasmiga ee golaha Golani. Sida dhammaan siriyaalkeena ballistic, tani waa mid ka mid ah rasaasta dhabta ah. Rabshadaha, dabcan, waxay bustaa budada si fiican u laalaaban. Isbaheysiga Isra'iil ee qaboobaha ah ayaa u dabaaldegaya unugta isboortiga ee ugu caansan Ciidamada Difaaca Israel. Waa kan ugu qadhaadhaa! Caanyeerada rasaastaasi waa kuwo asal ah oo Israel ah. Sifooyinka, maadaama ay ku jireen xusuusta loo yaqaan Israel ee loogu talagalay dalxiisayaasha sannado badan. Qalabkaan hadiyadeed ee hadiyadaha hadiyadaha ah waxaa ku jira kubad naxaas ah.
Waxyaabaha la midka ah
Ciidanka Isku-xirka Ciidanka Israel oo lagu qurxiyay ambalaasta IDF
Ciidamada Cirka ee Israel, xiddigta David Necklace
2 446 Ruqsadda.
Ciidamada Xoogga Dalka Israel
2 140 Ruqsadda.
Roman Beauty, Sanduuq Dhaqaale leh Roman Cajal ah
14 742 Ruqsadda.
Halkan waa buug ku saabsan saacadaha iyo qalabka dukaamada ee Europe, USA, Singapore iyo Hong Kong
Soo-saarista alaabooyinka Ruushka oo keliya isticmaalka shakhsi ahaaneed iyo qadar aan ka badnayn euro 7500.
Waxaad iibsan kartaa oo kaliya dukaamada rasmiga ah aduunka oo dhan.
Catalog of watches iyo accessories ka dalalka kala duwan ee adduunka oo la gudbiyo guud ahaan Russia iyo CIS.
Iibsiga alaabooyinka dunida oo dhan adoo adeegsanaya shirkad ku taal Hong Kong
© 2011-2020. Bixinta saacadaha soo socda ee adduunka oo idil: Jarmalka, Switzerland, Hong Kong, Singapore, Italy, USA + 7-966-158-75-08